Vanhu Votadza Kutora Mari Dzavo kuMasvingo
Vagari vekuMasvingo vatadza kutora mari dzavo mumabhanga nhasi, izvo vakawanda vanoti zvichavhiringa hurongwa hwavo hwezororo rekisimusi.
Muguta reMasvingo manga musina mufaro nhasi zvichitevera kutadza kutora mari kumabhanga kwaitwa nevagari vakawanda.
Mumwe wevanhu vasiri kufara, uye ari mutori wenhau, Energy Bara, anoti atadza kutora mari kubhanga rake reCBZ.
"Zvinhu zvacho zviri kuita zvichitoshata pakapinda mutungamiri mutsva takafunga kuti zvichaita nani but zvavakutoshata ike zvino nhasi ndatouya kubank handina kana kuwana kana cent, pa bank hapana vanhu nhasi not nekuti pane mari asi hapana kana mari saka hapana kana shanduko yatati taoona sevana veZimbabwe," Bara anotsanangura.
Mitsetse inogara iri mumabhanga mazuva ose, yange isiko, sezvo mabhanga asiri kupa vanhu mari.
VaPilani Ngoniye vanoti kushaikwa kwemari panguva ino kunorwadza zvikuru uye zvinhu zviri kutowedzera kushata chero hazvo pava nehurumende tsva.
“Tashaiwa mari kana cent tatodzoserwa kumusha totoshaya kuti tofamba neyi kudzokera kumusha uyezve handifungi kuti kisimusi yedu ichanakidza sezvo muMasvingo muno hamuna kana bank riri kupa vanhu mari, haa hurumende tsva iyi yakangofana neyaivapo sharu, yaivapo ikange nani, vakangoita recycle vanhu asi system ndoimwe, it’s from bad to worse,” vadaro VaNgoniye.
Muzvare Esther Chimanikire vati kushaikwa kwemari kunovhiringa mufaro wevanhu pazororo rekisimusi rinofanira kufarwa.
“Isu hatitozivi kuti krisimasi yedu inenge yakamirasei, izvezvi ndatodzosewa kubanka hanzi hatina mari apa ndinoda kuenda kumusha hakuna eco cash, kana swipe hakushandiswi card saka mbudzi dzacho tinouraya sei, zvakatotiomera kana vanobva joni vanochinjisa sei ma rands avo,” vadaro VaChimanikire.
Mumwe mushandi wemubhanga aramba kudomwa zita rake anoti kushaikwa kwemari muMasvingo kwakatanga nemusi weMugovera.
Vanhu vakambopembera apo vemabhanga vakawedzera mari yavaipa vanhu svondo ragadzwa mutungamiri wenyika asi iye zvino zvadzokera pazvaiva.
Mabanga emuMasvingo akaita seZB ne NMB ari kupa vanhu makumi maviri emadhora pazuva, ukuwo mabhanga eCBZ, Standrad Charted neBarclays achipa makumi mashanu emadhora pasvondo rose.